दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याकबक्सको अडीयो रेकर्ड कस्ले सार्वजानिक गर्यो ? सिआईबीले छानविन गर्ने - नमस्ते खबर
पढ्न पठाएकी छोरीले प्रेमी बनाएपछि ‘हत्या’, दिलीपकुमारका लागि सामाजिक प्रतिष्ठा ठूलो !
टिनको छाप्रोमुनि चिया बेचेरै मासिक औसत ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी
विवाहकाे वहान बनाएर पाँच रात संगै सुतेका प्रेमी एकाएक गायभ भएपछि सुन्धारामा हंगामा –
आर्थिक अभाव र संघर्सरत यी चार दृष्टीवीहीन युवाहरूको पिडा
‘मिनिरल’ वाटर पिउँदा क्यान्सरको खतरा !
दैनिक नयाँ खबरको साथमा नमस्ते खबर
अपराध र दुर्घटना
दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याकबक्सको अडीयो रेकर्ड कस्ले सार्वजानिक गर्यो ? सिआईबीले छानविन गर्ने
March 14, 2018 March 14, 2018 joes_limbu joes_limbu
युएस बंगला एयरलाइन्सका पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलबीचको अडियो रेकर्ड ‘लिक’बारे छानवीन गरिने भएकाे छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) काे सहयाेगमा अनुसन्धान गर्ने भएकाे हाे।
त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले छानवीन गर्न लागेको जानकारी दिए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को नियमअनुसार एटीसी सम्वाद र अन्य आँकाडा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसमा हामी छानवीन गर्दैछौं’, उनले भने, ‘ककपिट र एटीसीबीचको संवाद कसले बाहिर लिक गर्यो भनेर छानवीन हुन्छ।’
युएस बंगलाको विमान दुर्घटनाको २ मिनेटभित्र उद्धार टोली घटनास्थल पुगेकाे उनले दाबी गरे। दुर्घटनाको ३ मिनेटभित्र आपतकालीन सेवा पुग्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। ‘विमानमा लागेको आगोले विमानस्थलको घाँसे क्षेत्रमा डढेलो लागेकाले आगो नियन्त्रण गर्न अलि कठिनाई भएको हो। दमकल लगायत उद्दार टोली समयमै पुगेको हो’, महानिर्देशक गौतमले भने।
प्राधिकरणाले सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको विमान दुर्घटनापछि विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावरका ६ कर्मचारी सरुवा गरेको छ। सरूवा हुने सबै एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर कर्मचारी हुन्। आफ्नै आखाँ अगाडि ठूलो दुर्घटना भएको देख्दा कर्मचारी त्रसित हुने भएकाले त्यहाँका कर्मचारीलाई विभागमा सरुवा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ढाकाबाट काठमाडौं आएको यूएस बाङ्लाको एसबी २११ उडान दुर्घटनामा चालक दलका चारै जनासहित ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा २१ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये अधिकांश खतरामुक्त छन्। मृतकहरुको शव आफन्तलाई बुझाउन केही समय लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्। शवको पहिचान हुन समय लाग्ने र डिएनए परीक्षणपछि मृतकको शव आफन्तलाई बुझाइनेछ।
कमजोर सुरक्षा, लथालिंग उद्धार
चर्चित बैज्ञानिक स्टोफेन हकिङ्कसको मृत्यु